जनताको धारणामा अझै परिवर्तन आएको छैन (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » जनताको धारणामा अझै परिवर्तन आएको छैन (अन्तरवार्ता)
जनताको धारणामा अझै परिवर्तन आएको छैन (अन्तरवार्ता)
केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य बीपी यादव सुनिएको नाम हो । मधेशी राजनीतिकमा चर्चित अनुहार र नाम भएका बीपी यादव रातोपासपोर्ट कण्डमा मुछिएपछि उहाँको पछिल्लो राजनीतिक सिथिल भएको छ । पहिला जस्तो जस्तो सक्रिय हुनुहुन्न अहिले । उहाँको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ, मुद्दा फैसलाको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ उहाँ । फैसला भएपछि एउटा स्पष्ट लाइनबाट राजनीतिमा सक्रिय हुने उहाँको सोच छ । हुन त उहाँ पार्टी छाड्नु भएको छैन । पार्टीमा हुने डे टु डेको काम गरि नै रहनु भएको छ । पाएका जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गरि नै रहनु भएको छ । तर अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएको कारण मनमा कतै नकतै एउटा संकोच, एउटा भय रहिरहने भएका हुनाले राजनीतिक वृतमा उहाँ त्यति देखिनु हुन्न । यद्यपी उहाँ अहिले सप्तरीमा हुनुहुन्छ । सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवारी दिनका लागि उहाँ त्यहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ । दुई नम्बर क्षेत्रका लागि टिकट पाउने भनि सिफारिश भएर आएको छ केन्द्रमा । कात्तिक १६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । उम्मेदवारी दर्ता र वर्तमान राजनीतिक गठबन्धनलगायतको विषयमा सहारा टाइम्सले बीपी यादवसँग गरेको कुराकानीको अंशः
अचेल राजनीतिकमा कम देखिनु हुन्छ किन त्यस्तो ?
–कम देखिएको होइन, अलि सक्रियता कम भएको पक्कै हो । राजनीतिको दिनदिनै हुने काम तथा पार्टीले दिएको जिम्मेवारीहरु पूरा गर्दै आइरहेको छु । फेरि म पार्टीको त्यस्तो कार्यकारिणी कुनै जिम्मेवार पदमा नभएको कारणले पनि त्यति नदेखिएको हुनसक्छ । अर्को कुरा पहिलाको पोल्टिक्स र अहिलेको पोल्टिक्स फेरिएको छ । १० वर्ष अगाडि जुन प्रकारको राजनीतिक थियो त्यसमा अहिले आकाश जमिनको फरक भइसकेको छ । त्यतिबेला राजनीतिमा लागेर देश र समाजका लागि केही गरिरहेको छु, केही गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो । र, समाजमा त्यस्तै मान्यता पनि थियो । सम्मान पनि थियो तर अहिले त्यो सब छैन । पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्न थालेको छ । गुट उपगुटमा चल्न थालेको छ । कुनै व्यक्तिको एकल निर्णयबाट पार्टी चल्न थालेको छ । कसैले कसैलाई मान्न तयार छैन । सबै नेता छन् । त्यसैले अहिलेको पोल्टिक्स सचेत ढंगबाट गर्नुपर्छ । हडबडाउनु हुँदैन । सावधानी ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यहि भएर म अलि गति कम गरेको छु । राजनीतिक हिडाईमा सचेतता अपनाएको छु ।
१० वर्ष अगाडिको बीपी यादव र अहिलेको बीपी यादवमा मान्छेले फरक पाएको छ । त्यतिबेला तपाई पोल्टिक्सको लिड रोलमा हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादवदेखि मातृका यादवसम्मले तपाईसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो, मधेश आन्दोलनमा बीपी यादवको नाम सुन्नै वित्तिकै मान्छे हेर्नका लागि आउथ्यो ती सब एकाएक हरायो किन त्यस्तो ?
–मैले अघि नै भने नि कि त्यो समय अब रहेन । त्यो बेला एकअर्कालाई सम्मान गर्ने अवस्था थियो । काम गर्दा त्यसको मूल्याकंन हुन्थ्यो । यदि उपेन्द्र यादवमा त्यही इमान्दारिता छ भने त्यो दिन पक्कै सम्झिदै हुनुभएको होला । दश वर्षको अवधिमा उपेन्द्र यादवले के के गर्नुभयो त्यतातिर म जान्न चाहन्न तर यति त स्पष्ट भइसक्यो कि अब त्यही उपेन्द्र रहनु भएन । मातृका यादवको बारेमा पनि त्यही कुरा हो । मातृका यादव जेलमा हुँदाको अवस्था र जेलबाट निस्केपछिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा जमिन आसमानको फरक छ । यो चुनावको समयमा म कसैको टिप्पणी गर्न चाहन्न मेरालागि दुईटै व्यक्ति आदरणीय हुनुहुन्छ । रह्यो आन्दोलनको कुरा । पहिलो मधेश आन्दोलन जति व्यवस्थित भएको थियो, त्यो बेलाको आन्दोलनमा जुन इनर्जि थियो । त्यो अहिलेको आन्दोलनमा छैन । त्यो बेलाको आन्दोलनमा संयमितता थियो तर यसपटकको आन्दोलनमा त्यो कमी देखियो । जसलाई जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्थे । अर्थात आन्दोलन कसैको नियन्त्रमा थिएन । तर, पहिलो मधेश आन्दोलन संगठनको नियन्त्रणमा थियो । चाहेको बेलामा रोक्न सक्यो, चाहेको बेलामा फेरि शुरु गर्न सक्यो तर यसपटकको आन्दोलन त्यस्तो थिएन । त्यही भएर यो आन्दोलन असफल भएको हो । त्यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि विना सहमति टुग्यो तर पहिलो मधेश आन्दोलनमा दुईपटक सम्झौता भएको थियो । तर, यसपटक एउटा पनि सहमति हुनसकेन । आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेकालाई सहिद घोषणा गर्न लगायो त्यसैलाई नै उपलब्धी मानेर आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा भाग लिएको छ ।
तपाईको विचारमा चुनावमा भाग लिनु हुँदैन्थ्यो त ?
–मेरो त्यो धारणा होइन । चुनाव लोकतन्त्रको गहना यसको विरोध गर्न सकिदैन । तर मधेशवादी दलसँग कहि नकही भूल भएकै हो । आन्दोलनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । रणनीतिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेन । अव्यवस्थित आन्दोलन भयो र असफल भयो । रणनीतिक ढंगबाट आन्दोलन गरेको भए आन्दोलन सफल हुन्थ्यो । र, आज मधेशको अर्कै अवस्था हुन्थ्यो । चुनावको पनि अर्कै रौनक हुन्थ्यो । मधेशमा जानु भयो भने मधेशी जनताको गुनासो मधेशी नेताको बारेमा सुन्न सक्नुहुन्छ । तपाईलाई याद होला । २०६४ सालमा भएको आन्दोलनपछि फागुन १६ गते भएका आठ बुँदे सम्झौतापछि मधेशमा जुन उत्साह थियो त्यो हेर्न लायक थियो । मधेशी जनता पनि खुशी खुशी चुनावमा भाग लिएका थिए र मधेशवादी दलले त्यति सीट ल्याएका थिए । तर अहिलेको अवस्था हेर्नुस्, त्यो अहिले कतै पाउनु हुन्न । यसपटक पनि आन्दोलन भएको हो नि । पहिलाको भन्दा कडा आन्दोलन र लामो समयसम्म आन्दोलन भयो तर जनताको धारणामा परिवर्तन आएको छैन । शुरुको आन्दोलनको समयमा तीनटा मधेशवादी दल थियो । यसपाली दुईटा मात्र छन् । त्यसमा पनि तालमेल गरेका छन् । अब परिणाम हेर्न बाँकी छ । स्थानीय तहमा त सोचेको जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिदैछन् । परिणाम हेर्नका बाँकी छ ।
राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच तालमेल भएको छ, यस अवस्थामा कति सीट ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–अहिले त्यो भन्न हतार हुन्छ । अहिले उम्मेदवारी पनि परेको छैन । कुन कुन दलबाट ककसले उम्मेदवारी दिन्छन् त्यसमा भर पर्छ । उम्मेदवारी परेपछि चुनावले पिक अप लिएपछि मात्र केही अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अहिलेलाई यति भनौ राजपा कति सीट ल्याउँछन् थाह छैन तर मधेशमा पहिलो पार्टी हुने निश्चित छ ।
तपाईले पनि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भनि सुनिएको छ के सही हो ?
–हो, सप्तरीको दुई नम्बर क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु । । जिल्लाबाट मेरो केन्द्रमा सिफारिश भएको छ । केन्द्रबाट हालसम्म टुगों लागेको छैन । काँग्रेससँग तालमेलका लागि छलफल भइरहेको छ । काँग्रेससँग टुगों लाग्ने वित्तिकै उम्मेदवारको टुगों लगाउँछौ । राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच तालमेलको टुगों लागिसकेको छ । अब दुईटै दल उम्मेदवारको पनि टुगों लगाउँने छन् ।
काँग्रेससँग तालमेल हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–हामीलाई भन्दा काँग्रेसलाई तालमेल गर्ने बाध्यता छ । किनभने दुई ठूला दल एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाई सकेका छन्, यस अवस्थामा काँग्रेसलाई गठबन्धन बनाउन हतार हुनुपर्ने हो । वामगठबन्धन बनेपछि कसैलाई क्षति गर्छ भने त्यो नेपाली काँग्रेस । यदि यस अवस्थामा काँग्रेस हामीसँग मिलेन भने समाप्त नै हुन्छ । त्यसैले हामीसँग तालमेल गर्न बाध्यता छ त्यो दललाई । मधेशमा काँग्रेससँग तालमेल नभएपनि हामीलाई काम चल्छ हाम्रो पार्टी राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच तालमेल भए हुन्छ तर काँग्रेससहितको एउटा गठबन्धन बनायो भने त्यसले लोकतान्त्रिक धारलाई अवश्यक नै फाइदा पुग्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने कुराले मात्र हामी काँग्रेससँग तालमेल गर्न चाहेका हौ तर काँग्रेसका नेताहरुको बोली व्यवहार र कुरा सुन्दा होला जस्तो लाग्दैन । साझा अवधारणामा उनीहरुले सविधान संशोधन र मधेशको मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा राख्न चाहेका छैन । हामीले मागे अनुसारको सीट दिन चाहेका छैनन् यद्यपी कुरा मिलाउनका लागि वार्ता र छलफल अझै जारी छ ।
सुने अनुसार देशैभरि प्रत्येक सीटमा तालमेल नभएपनि शीर्ष नेताहरुको बीचमा तालमेल गर्ने कुराकानी भइरहेको छ, कतिको सत्यता छ ?
–हाम्रो मान्यता भनेको यदि तालमेल हुने हो भने सबै सीटमा गरौं नभए एउटा कुनै नेता विशेषलाई मात्र जिताउनका लागि तालमेल गर्नुहुँदैन । ठूला नेताहरु त त्यतिकै जितिहाल्नु हुन्छ, तालमेल त तल गर्नुपर्छ जहाँ चुनावमा ठूलै प्रतिस्पर्धा गरिहनु परेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि तालमेल गर्नुपर्छ । शीर्ष तहमा मात्र तालमेल गर्नुहुँदैन र हुँदैन पनि सायद । कसैले व्यक्तिगत रुपमा कसैले कसैलाई सहयोग गर्छन् भने त्यो बेग्लै कुरा हो तर शीर्ष तहमै मात्र तालमेल यो वैज्ञानिक हुँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तो देशैभरि हरेक सीटमा तालमेल गरेर गए मात्र गठबन्धनप्रति विश्वास बढ्छ नत्र आफ्नो छोरालाई, आफ्नो बुहारीलाई, आफूलाई जिताउनका लागि मात्र तालमेल गरे जस्तो देखिन्छ ।
वामगठबन्धनलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
–कुनै पनि गठबन्धन बन्नु, पार्टी एकीकरण हुनु सकारात्मक कुरा हो । यदि वामगठबन्धन पनि राम्रो नियतले बनेको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । अहिले त गठबन्धन नै बनेको छ । अब यसले कसरी अगाडि बढ्छ के के गर्छ त्यो हेर्दै जानुपर्छ राम्रो गर्यो भने स्वागत गर्नुपर्छ नभए आलोचना गर्नुपर्छ ।
सहारा टाइम्स पत्रिकाको कात्तिक १६ गतेको अंकबाट